🥇 Akaụntụ na nhazi nke iga
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 11
Video nke ndekọ ego na nzukọ nke njem
Dezie ndekọ na nhazi nke njem
USU-Soft automation cargo transport management system bụ mmemme na-edozi ọtụtụ ọrụ dị mkpa n'otu oge. Ọ na - enyere aka ịkwalite ọrụ nzukọ site na ị na-akpaghị aka akụkụ ya nke azụmahịa. Sọftụwia ahụ na - eme ka ndekọ ego na ụlọ nkwakọba ihe na - akpaghị aka, yana ọrụ yana dọkụmentị na - adị mfe na ọsịsọ. Edere ihe omume ọ bụla nke ọkachamara ụlọ ọrụ ọ bụla na sistemụ nhazi nzukọ, wee chịkọta ma nyochaa n'ihe metụtara omume ndị ọzọ. Nke a bụ ihe ndabere nke a atichazi miri emi analysis, data nke nke dị oké mkpa maka ezi management mkpebi. Ihe omume nke nhazi nke nzukọ site n'aka ụlọ ọrụ anyị ga-enyere aka na njikwa nke nzukọ gị. N'ezie, ọ na - enye gị ozi ị na - arụ n’ọrụ gbasara ihe niile na - eme n’ọrụ gị. Transportgbọ njem bụ ụdị ọrụ ụgbọ njem pụrụ iche. Iji mee ka ha nwekwuo ọnụ ma baa uru, ị kwesịrị ị paya ntị na usoro ọ bụla. Ọ bụrụ na nzukọ ahụ nwere eserese eserese na-adịghị mma, mgbe ahụ ụzọ nke ibu ụgbọ mmiri ga-eji na-enweghị isi, ọnụ ahịa ga-ebili. Na enweghị njikwa, gwongworo nwere ike ịdị nkịtị ma ọ bụ jiri ya na-akpata ego na-ezighi ezi maka ndị ọrụ. A ghaghị ịhazi ụgbọ njem n'ụzọ doro anya, usoro nchịkwa njikwa ego nwere ike inyere aka na nke a.
Sistemụ njikwa ụgbọ njem akpaaka nke nhazi nzukọ bụ ohere iji kwado mmekọrịta dị mma na ndị ahịa, mụọ ọchịchọ na ọchịchọ ha. Usoro ihe omume nke nhazi nzukọ nwere ike nyochaa ngwongwo, nkwekọrịta, ọ gaghị enye gị ohere imebi usoro nke nkwekọrịta ahụ, ma ọ bụ n'usoro ọrụ ahụ, ma ọ bụ na usoro oge. Mbuga ibu ọ bụla ga-enwe onye ọrụ nwere ọrụ nke na-ahụ na a ga-eziga ma nata oge ọ bụla na oge. Ihe okike nke sistemụ njikwa nke njem n'okporo ụzọ ibu malitere na njedebe nke narị afọ gara aga. Na mbu ha mara mma mmemme oge ochie. Na mmepe nke nkwukọrịta ụgbọala, saturation nke ahịa na njem, ihe ndị achọrọ maka usoro nyocha nke nzukọ na-agbanwe agbanwe. Taa, n'ahịa ibu, mmadụ enweghị ike ịme na-enweghị usoro dị ike, na-arụpụta ọrụ nke nhazi usoro nke nwere ike iweta usoro niile.
Kedu ihe usoro nchịkwa ga-enye ndị ọrụ ngwongwo niile na mgbakwunye na ijikwa njikwa ụgbọ njem na ibu? Nke mbụ, ogo ọrụ na-eto, ndị ahịa na-ahụkwa nke a ngwa ngwa. Njikarịcha nke njem na-akwụ ụgwọ ruru 25% ugbua n'ime ọnwa isii mbụ nke iji usoro akpaaka. Oge ọ na-ewe ịnyagharịa site na lọjistik yinye belata site na otu ego. Mmemme akpaghị aka nke nhazi nzukọ na-enye gị ohere belata nkwụsị nke njem okporo ụzọ site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 15%, yana usoro atụmatụ nnyefe belata 95% Akụrụngwa ahụ na-enyere aka mee ka njikwa dị irè, n'ihi na n'eziokwu ọ ga-aza ọtụtụ ajụjụ ndị ọkachamara na-ajụkarị na njikwa ụgbọ njem - oge ole ka ọ na-ewe iji hazie ụzọ ma hazie nnyefe ibu? Etu esi belata ọnụahịa nke njem n'okporo ụzọ, ebe ị na-abawanye uru nke ọrụ ndị a? Kedu uru bara uru karị - iji akụrụngwa ụgbọ gị ma ọ bụ iji ọrụ ụgbọ njem nke onye òtù ọlụlụ? Netwọk ahụ niile ọ dị irè, egwuregwu ahụ ọ dị kandụl ahụ?
Arụ ọrụ akpaghị aka abụghị maka iji mpempe akwụkwọ Excel dị ka ụfọdụ ndị chere. A na-eme ezigbo akpaaka site na iji usoro dị elu. Ma ọ ga-abụrịrị ọsịsọ, nke ziri ezi, na-enweghị igbochi, ịrụ ọrụ nke ọma, nke a pụrụ ịdabere na ya, na-ekwe nkwa ịgba ọsọ ọsọ. Usoro nke iji ya ekwesịghị inwe mgbagwoju anya; anyị na-ahọrọ ntụgharị dị mfe nke ejighi ihe ndọpụ uche na-enweghị isi. Otu n'ime mmemme kachasị mma nke njirisi ngwa ahịa ibu bụ USU-Soft. Ọ bụ ndị mmepe nwere ahụmahụ gbalịrị iburu n'uche ọnụ ọgụgụ kachasị nke ihe ndị achọrọ na atụmatụ nke ụdị njem a, yabụ mmemme nke nhazi nzukọ dị mma maka nlekota na ịkwalite usoro njem mgbe ị na-arụ ọrụ na ibu na ụzọ njem. Sistemụ USU-Soft na-akpaghị aka na-eme ka atụmatụ ụzọ dị, na-eburu n'uche ihe niile - site na oge enyere iwu na ụdị ibu. Ọ ga - enyere gị aka ịnata akụkọ n’oge ọ bụla. Akpaghị aka na njikwa na njikwa ego, nkwakọba ihe akpaghị aka, na akwụkwọ ederede - ndị a bụ naanị akụkụ nke ọrụ bara ụba na nke obosara nke mmemme USU-Soft nke nzukọ nhazi. Usoro nke iduzi njem na-adị ngwa ngwa, n'ihi na ngagharị nke ụgbọ ala ọ bụla dị mfe iji soro.
Sistemụ njikwa akpaaka na-ebelata ọrụ na ndị ọrụ site na mbenata ọnụ ọgụgụ nke usoro iwu ịmanye. Ọrụ ọ bụla site na ịhazi ọrụ na ntinye ya ga-adị ngwa ngwa. Usoro a na - enyere aka melite njikwa nke usoro njem. Ọ gaghịzi ewe oge dị ukwuu maka ụlọ ọrụ ahụ ịghọ onye ndu na nkebi ya, yana n'ihe gbasara nnyefe ngwaahịa, ị ga-abụrịrị onye na-enweghị atụ. N'otu oge, usoro nchịkwa agaghị emebi mmefu ego nke ụlọ ọrụ. Ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ụgwọ ndenye aha maka ya, ebe ọnụahịa nke ikike ahụ zuru oke.
Sọftụwia ahụ na - enweta ebe nchekwa data ndị ahịa zuru oke zuru oke yana nkọwa nke nkwekọrịta ọ bụla na ibu ọ bụla ebuburu ibu. Nke a na-eme ka mmekọrịta nke onye ahịa ọ bụla na-enyere gị aka. Usoro ihe omume nke ịhazi ọnụahịa na-enyere aka ịkwalite ihe ndị ụlọ ọrụ na-azụ maka mkpa nke ya. Ọ ga-egosiputa mmefu, mkpa, ọnọdụ kachasị mma nke ndị na-eweta ngwaahịa iji nye ụlọ ọrụ ụgbọ ala ohere iji belata ụgwọ. Chịkwa n'ụlọ nkwakọba ihe ga-enyere aka ibubata na ibudata na oge ma buru n'uche ngagharị nke akụkụ ọ bụla, mmanụ. Ngwa mkpanaka nke ngwaọrụ elektrọnik, nke nwere ike ịgbakwunye usoro kọmputa ahụ, ga-enyere aka n'ihe gbasara njikwa, yana ime ka nkwukọrịta dị n'etiti ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ahịa nke ọrụ ibu dị mfe. Nwere ike ịmụtakwu banyere nuances nke azụmahịa ụgbọ ala, ụzọ iji bulite mbugharị nke ngwongwo sitere na Akwụkwọ Nsọ nke onye ndu ọgbara ọhụrụ. Mbipụta ya emelitere ga-enyere onye ntụzi aka idube ụlọ ọrụ ahụ gaa nke ọma.